Ekhaya kude - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguKaitlin
I-Home Away yindawo encinci ye-acreage ebekwe ngaphandle nje kweNqanaba eliPhezulu elimiselwe ukunika iindwendwe ubumfihlo kwikhaya ekwabelwana ngalo. Siyakuthanda ukwamkela kunye nokudibana nabantu abatsha kwaye sonwabele ukwabelana noluntu lwethu lwaseMantla kunye neendwendwe.
Ngenxa yobhubhani we-COVID-19, sinokucela ulwazi malunga nokuhamba kunye nobume bogonyo phambi kokuba sivume isicelo ngenxa yokuba uludwe lwethu likhaya ekwabelwana ngalo.
EKhaya kude, uya kuba nokufikelela ekhitshini, kwigumbi lokuhlala, indawo yokuhlamba impahla, i-BBQ kunye neyadi. Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kwelinye icala lekhaya. Kukho amagumbi amabini okulala kwelinye icala lendlu afumanekayo ukuba asetyenziswe ziindwendwe-elinye linebhedi enkulu kunye nelinye elinebhedi ephindwe kabini enelinen yokulala nguMaison Tess. Kukho igumbi lokuhlambela eligcweleyo elisetyenziswa ziindwendwe ezihlala emagumbini.
Nceda uthumele umyalezo ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izicelo ngaphambi kokuba ubhukishe - okt: ukuphuma kade, inani leendwendwe, njl.
Ifakwe kumgama oziikhilomitha ezili-11 empuma yedolophu yeNqanaba eliPhezulu, iHome Away yindawo entle yokuhlala ukuze ufumane indawo ethe cwaka yasemaphandleni kwaye uthathe ikhefu emva kohambo olude ukuya kuluntu lwethu lwaseMantla. I-Home Away isekufutshane ngokwaneleyo edolophini ukwenza uhambo olukhawulezayo lwezinto eziluncedo zasedolophini.
Umbuki zindwendwe ngu- Kaitlin
Pharmacist living in Northern Alberta with a passion for travel. We have had some amazing experiences with Airbnb hosts who have shared their space with us and we strive to do the same for our guests!
Mna neqabane lam sisenokuba sekhaya ngokuxhomekeke kwiishedyuli zomsebenzi. Ngelixa siza kukunika indawo ngelixa ulundwendwe lwethu, sikwafumaneka lula imibuzo.
Sinenjana yangaphandle enokubulisa ngaphandle kokuba ucelwe ukuba ingakhululekanga.